PressReader - Isolezwe: 2017-09-14 - Bandisa ababhali ngokukhuthaza intsha
Bandisa ababhali ngokukhuthaza intsha
INHLANGANO ekhuthaza ukubhala nokufunda, ifuna izingane ziqale zisencane ukubhala izincwadi ukuze kwande ababhali.
IDancing Pencils Book Club okuyinhlangano ezimele, ngempelasonto yethule izincwadi ezingu-20 zabafundi abaqeqeshwe ngaphansi kwayo. Lo mcimbi waminyaka yonke oba ngoSepthemba okuyinyanga ekhuthaza ukufunda nokubhala, ubuseBat Centre, eThekwini.
Ubuzimaziswe nguNksz Gcina Mhlophe wodumo lwezinganekwane, obeyisikhulumi sosuku.
UMnuz Ayanda Hlabisa okhulumela iDancing Pencils, uthe inhlangano yabo igqugquzela ukuthi izingane zibhale izincwadi, zifundwe ezikoleni.
“Siqeqesha abathanda ukubhala bese beyozivulela izinhlangano zabo emtwapweni yolwazi nanoma yikuphi. Iningi lezinhlangano zisebenza nezikole, okuba nothisha abasiza abafundi ngokubhala. Kukhethwa imibhalo yezingane ilethwe kithina sibone engalungela ukuba ishicilelwe,” kusho uHlabisa.
Uthe izincwadi ezishicilelwayo kunikelwa ngazo ezikoleni nakwezinye izinhlangano zababhali. Uveze nokuthi bazifaka nasemibukisweni yezincwadi ukuze ababhali abasebancane baziwe.
“Sithole ukuthi kunezikole ezingenazo izincwadi ezanele. Sithathe zona lezi ezibhalwe ngabanye abafundi sanikela ngazo. Izingane ziyazijabulela izincwadi ezibhalwe ngontanga futhi ziziqonda kangcono,” kusho uHlabisa.
Uthe inhlangano yabo iyaziqhenya ngokukhiqiza ababhali abasebencane abayisibonelo kwabanye, osekushicilelwe izincwadi zabo.
Kubabhali okwethulwe izincwadi zabo ngempelasonto kubalwa uNikiwe Gcabashe (8), waseGlenwood oqale ukubhala nyakenye.
Nonyaka kwethulwe incwadi yakhe ethi ‘Little Buddy’ ezofundwa ngabanye ontanga ezikoleni nasemtapweni yolwazi. Bekukhona noMnuz Khulekani Magubane oseyintatheli yephephandaba laseCape Town, owaqala ukubhala kwiDancing Pencils eneminyaka engu-13. Nonyaka uMagubane ubethula incwadi yakhe ka-19 yeSayensi esihloko sithi ‘The Sirius Squad, Earth’s Last Defense.’
UHlabisa uthe sebenikele ngezincwadi ezingaphezu kuka-800 ezikoleni ezahlukene nonyaka. Muva nje banikele ngezingu-200 KwaMyeza Pimary eHammarsdale. Okumjabulisayo wukuthi sebenezinhlangano zokubhala ngisho ezindaweni zasemakhaya okubalwa iNkandla nakwaNongoma.
Phakathi kwezikole ebezikhona ngempelasonto yiSogidi Primary yaseNdwedwe, abafundi bayo abangaphezu kuka-26 abahlomule ngezincwadi.